အိမ်ကနေတစ်စက်မှမခွာဘဲ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ခရီးသွားဓာတ်ပုံတွေကိုဖန်တီးသူတစ်ယောက် | Buzzy
အခြေခံပစ္စည်းလေးတွေသာအသုံးပြုပြီး လှပတဲ့ရှုခင်းဓာတ်ပုံတွေကိုဖန်တီးသူတစ်ယောက်ပေါ်လာပါပြီ။ ကတ်ထူပြား၊အင်္ဂတေ၊သတင်းစာနဲ့ ပန်းချီဆေးတွေကိုပဲအသုံးပြုပြီး ကင်မရာနည်းအပညာနဲ့ ရှုခင်းပုံတွေကိုဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်တီးရှင် Vatsal Katria က အိမ်ကနေတစ်စက်မှမခွာဘဲ ရိုက်ကူးထားတဲ့ လှပတဲ့ခရီးသွားဓာတ်ပုံတွေကို သူ့ရဲ့အင်စတာဂရမ်မှာလည်းတင်ထားပါတယ်။
အခွခေံပစ်စညျးလေးတှသောအသုံးပွုပွီး လှပတဲ့ရှုခငျးဓာတျပုံတှကေိုဖနျတီးသူတဈယောကျပျေါလာပါပွီ။ ကတျထူပွား၊အင်ျဂတေ၊သတငျးစာနဲ့ ပနျးခြီဆေးတှကေိုပဲအသုံးပွုပွီး ကငျမရာနညျးအပညာနဲ့ ရှုခငျးပုံတှကေိုဖနျတီးထားတာဖွဈပါတယျ။ ဖနျတီးရှငျ Vatsal Katria က အိမျကနတေဈစကျမှမခှာဘဲ ရိုကျကူးထားတဲ့ လှပတဲ့ခရီးသှားဓာတျပုံတှကေို သူ့ရဲ့အငျစတာဂရမျမှာလညျးတငျထားပါတယျ။
1. The Lake View
2. My Ayers Rock
3. Ocean Rocks
5. My Island
6. The Temple of Apollo
8. Ancient Times
9. My Wild Beauty